Zvakanakisa zveStaten Island 1 bd 2 ba condo YEMAHARA neParking uye nyore kuwana NYC
Real Estate Listings: » Real Estate Agent Directory » Property Managers » US » New York » New York City » Zvakanakisa zveStaten Island 1 bd 2 ba condo YEMAHARA neParking uye nyore kuwana NYC1
Iwe uchada ichi chinodakadza, chakapamhama Imwe Yekurara condo loft ine inoshamisa panoramic maonero eNew York Harbor uye Verrazano Narrows Bridge. Iyi 1 yekurara, 1.5 yekugezera condo loft ine ichangobvira tsika makabati, kicheni nyowani uye nyowani dzekugezera zvinokupa iwe pamusoro pe1,100 mativi emamita enzvimbo yerupo yekufamba-famba (pasina kurasikirwa iyo yakasarudzika, inodziya mhepo kana yave nguva yekumbundira neako wega balcony ne bhuku rakanaka). Muka mangwanani ega ega kunotyisa kubuda kwezuva muSouth uye kutsaukira kunorara husiku hwega hwega nerunyararo ruzha rwezvisikwa. Inowanikwa munharaunda ine hushamwari nharaunda ine mubairo-unokunda chikoro system kumucheto kweManhattan County, maminetsi makumi maviri neshanu chete kubva kunoshamisa Guta reNew York. Imba inouya nekupaka kupaka. Inowanikwa munharaunda inofamba ine daro rekufamba kuenda kuBayou, Enoteca Maria, Imba yeWine, National Lighthouse Museum, Pronto Pizza, Gringos, The Hop Shoppe, Kills Boro Brewing Company, Vinum Wire Bar & Cafe, Pier 76 Italian Restaurant, CRUNCH - Staten Island, Staten Island URBY, uye Lakruwana. Iyi yekurenda chivakwa inongowanikwa kune iye roja anoita ZVINO. Mira kuverenga utange kufona. Kwechinguva chidiki chete hapana No Broker Fee. Kwete Kubhadhara Mari. Rondedzero iyi ine rukudzo rweR New York, Tifonerei nhasi
Regended on 27. Oct 2019
Bata mushambadzi 646-338-xxxx
Regended on October 27, 2019